२०७२ मङ्सिर १५ गते मङ्गलवार
को प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस
मधेस आन्दोलनको समर्थनमा विद्यार्थीहरूद्वारा मानव साङ्गलो
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ पर्सा जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयका छात्र–छात्राहरूले मधेस आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सोमवार वीरगंज नगर क्षेत्रमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, सामुदायिक विद्यालयलगायत जिल्लाका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूको आयोजनामा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । परवानीपुरको हिमाल आयरनदेखि वीरगंज छपकैयासम्म विद्यार्थीहरू हात गाँसेर सडकमा उभिएका थिए । बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । मुख्य सडकमा ठाउँ नपाएर विद्यार्थी कोचाकोच भएपछि एकै ठाउँ तीन लाइनसम्म गरी विद्यार्थीहरू उभिएका थिए । सो क्रममा विद्यार्थीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए । हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. भगवानप्रसाद यादवको नेतृत्वमा घण्टाघरबाट निस्केको मधेस आन्दोलन समर्थक जुलुस माईस्थान, अलखिया मठ आदर्शनगर हुँदै मुख्य सडकमा आएर मानव साङ्लोमा परिणत भएको थियो । मानव साङ्लोमा विद्यार्थीहरू स्कूल पोशाकमा सडकमा आएपछि यातायात ठप्प भएको देखिन्थ्यो । विद्यार्थीहरूले आआफ्नो स्कूलको तुल ब्यानर झुन्ड्याउँदै मधेसको माग पूरा गर,
भारतीय चालक र आन्दोलनकारीबीच विवाद
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ आज बिहान भारतीय चालक तथा नाकाबन्दी गरी बसेका नेता, कार्यकर्ताबीच विवाद भएको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सामान पुर्‍याई भारत फर्किने क्रममा भन्सार क्षेत्रमा रहेका ३० वटा भारतीय सवारीसाधन भारतमा जान दिन चालकहरूले दबाब दिएपछि विवाद भएको थियो । एकाबिहानै भारतीय चालकहरूले मितेरी पुलमा पुगी आन्दोलनकारीहरूको पाल तथा बाँस तोडफोड गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । नागाल्यान्ड निवासी एक भारतीय चालकले आफूहरू सात दिनदेखि भन्सारमा बसेको र घर जाने वातावरण कसैले नबनाएपछि दु:खित भएको बताए । मितेरी पुलमा आज बिहान थोरै सङ्ख्यामा रहेका कार्यकर्ता र भारतीय चालकबीच हातपात समेत भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । विवादको खबर पाएपछि धर्नास्थलमा पुगेका मधेसी नेताहरूले बिहानदेखि १२ बजेसम्म मोटरसाइकल आउनजान पनि रोक लगाएका थिए । विगतमा भारत जान मोटरसाइकलमा रोक नलगाएको तर भारतीय चालकहरूले विवाद गरेपछि भारतीय केही व्यक्तिले पनि नेपाली गाडी भारतमा रोकेको सूचना पाएपछि आफूहरूले पनि रोकेको नेता शिव पटेलले जानकारी गराए । चालकहरू जबरजस्ती गाडी स्टार्ट गरी मितेरी पुल जान खोज्दा प
वीउमनपाको खातामा ६ सय मात्र
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ आन्तरिक राजस्व र अनुदान सहयोग गरी वार्षिक १ अर्बको बजेट भएको वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयको खातामा अहिले केवल ६ सय रुपियाँ मात्र छ । जारी मधेस आन्दोलनको कारण भदौ महिनादेखि सड्ढलन हुनुपर्ने आन्तरिक राजस्व ठप्प भएको र अनुदान सहयोग पनि आउन ढिलो भएको कारण अहिले उपमहानगरपालिकाको खातामा केवल ६ सय रुपियाँ रहेको बताइएको छ । वार्षिक ३२ करोड आन्तरिक राजस्व सड्ढलन हुने उपमहानगरपालिकाको भदौदेखि कात्तिकसम्म करिब ६ करोड राजस्व सड्ढलन हुने लक्ष्य थियो । राजस्व सड्ढलन नभएको र अनुदान सहयोगसमेत कात्तिक महिनासम्मको कर्मचारी तलबमा खर्च भएकोले अहिले खाता नील भएको हो । अनुदान सहयोगको लागि आउनुपर्ने रकमको वीउमनपाले ताकेता गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र नागरिक दायित्व
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव सय दिन नाघेको आन्दोलन टु·िने सड्ढेत देखिएको छैन । सरकार झुक्दिनँ भन्दैछ भने आन्दोलनकारी माग पूरा नभई सङ्घर्ष नछोड्ने अडानमा छन् । दुवै अतिवादको चरम मार मुलुक र जनता खेप्दैछ । भूकम्पले थिलथिलो भएको पीडितको मात्र होइन, तराईदेखि हिमालसम्मको चुलो निभेको छ । औषधी, अक्सिजन, उपचार र रगतबिना बिरामी मर्दैछन् । मानवीय सड्ढट चरमोत्कर्षमा पुग्दा पनि निकास नदिनु जनविरोधी काम हो । संयुक्त मधेसी मोर्चाले शुरु गरेको आन्दोलनमा यतिखेर चार धारका शक्ति सक्रिय छन् । जसको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । मधेसवादी दल, सशस्त्र शक्ति, पृथकतावादी मानसिकता तथा गैरदलीय जमात र बौद्धिक वर्ग । अहिलेसम्मको स्थितीमा मधेसवादी दलबाहेक शक्ति गौण छ । तत्काल निकास आयो भने सुषुप्त नै रहने छ । तर सङ्घर्ष लामो भयो भने अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । देशको अखण्डताको निम्ति नझुक्ने रटान लगाइरहेका प्रधानमन्त्रीले अखण्डताप्रति बढ्दै गएको चुनौती उपर ध्यान नदिनु विडम्बना मात्र होइन, राष्टिय एकता र अखण्डताको बाधक पनि हो । मधेसको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा भारतसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति दिनुले मधेसलाई देश
अवस्था कठिन छ विपरीत छैन
नेपाली जनताले सय दिनभन्दा बढी सास्ती खेपिसकेको छ । केही सुविधाभोगीहरूलाई यसले केही अप्ठयारो पारेको बाहेक सामान्य जनताले अत्तिएको अवस्था प्रकट गरेको छैन किनकि अव्यवस्थामा पनि व्यवस्थाको सूत्रपात भएको छ । जनताको धैर्य लाचारहीनताको सड्ढेत होइन, निरन्तर भोगिरहने एकैनासे समस्याबाट पार पाउने अभीप्सा हो । जहिले पनि राष्ट्रिय पहिचानको लागि पीडित भइरहनु र आन्तरिक तथा बाहय हैकममा बाँचिरहने दुरवस्थाबाट निकास पाउने आकाङ्क्षाजन्य धैर्य हो यो । आन्तरिक विषमताको सरोकार राज्यसँग, सरकारसँग छ भने बाहय विषमता आर्थिक परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने बाटोको चाहना हो । यद्यपि यो दोस्रो चाहना फलिभूत हुने अपेक्षा थोरै छ । किनकि नेपाली शासकहरूको प्रवृत्ति आदिकालदेखि परमुखापेक्षी रहेको छ । आफ्नो सुख सयलको संसाधन अरूले जुटाइदेओस्, शासक हुनु भनेको सामन्त हुनु हो, लिन मात्र जान्ने, दिन वा गर्न नजान्ने–नहुने अवस्था हो भन्ने मनोग्रन्थिबाट मुक्त नहुन्जेल नेपाल निर्भरताको बाटोमा हिंड्न सक्दैन । नेपाली जनताले आफूलाई स्वाभिमानी ठानी टाउको ठाडो पारी हिंड्ने अवस्था आउँदैन । विश्वका विकसित मुलुकहरूको राजनीतिक इतिहासको
२०७२ मङ्सिर १४ गते सोमवार
वीउमनपाले डिजल पायो, फोहर सङ्कलन शुरु
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ वीरगंज उपमहानगरपालिकाले डिजल पाएपछि फोहर उठाउने काम शुरु गरेको छ । छठपछिको अवधिमा इन्धन नपाएको कारण वीउमनपाले फाहोर उठाउन सकेको थिएन । शहरको मुख्य सडक तथा चोकहरूमा झाडू बढार्ने काम भए तापनि फोहोर सड्ढलन तथा उठाएर फयाँक्ने काम अवरुद्ध थियो। वीउमनपाले आइतवार अमलेखगंजबाट इन्धन प्राप्त गरेको जनाएको छ । इन्धन पाएलगत्तै आइतवार दिउँसोदेखि नै मुख्य सडकमा थुप्रिएका फोहर उठाउने काम शुरु गरेको सरसफाइ अधिकृत दिवाकरकृष्ण मानन्धरले बताए । डिजल अभावले फोहर सड्ढलन नहुँदा नाउक्षे अस्पताल क्षेत्र, बिर्ता, गहवा, नेशनल ट्रेडिङ, मुर्ली, त्रिमूर्तिचोकलगायत क्षेत्रमा फोहरको डुङ्गुर सडकमा थुप्रिएको छ । जारी मधेस आन्दोलनको कारण इन्धन अभावले वीउमनपाले विगतका समयमा पनि फोहर सड्ढलन गर्न सकेको थिएन । वीउमनपासँग फोहर सड्ढलनको लागि १३ वटा टयाक्टर र दुईवटा टिपर गरी १५ वटा सवारीसाधन छ । ती साधनलाई दैनिक १ सय लिटर डिजल आवश्यक पर्ने र सो उपलब्ध नहुँदा फोहर सड्ढलनमा असर परेको सरसफाइ अधिकृत मानन्धर बताउँछन् । वीरगंजबाट दैनिक करिब ७० टन फोहर सड्ढलन हुने गरेको छ । य
नेका पर्सा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारीमा
प्रस, परवानीपुर, १३ मङ्सिर/ नेपाली काङ्ग्रेस पर्साले आगामी दिनमा मधेसको हकहित तथा मधेस आन्दोलनको माग प्राप्तिको निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालनी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकाबाट राजीनामा दिएर कालो झन्डामुनि गोलबन्द भई आन्दोलन गर्न विभिन्न पक्षबाट आएको दबाब अस्वीकार गर्दै नेकाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट व्यापक जनपरिचालन गरी छुट्टै रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर शान्तिपूर्वक मधेस आन्दोलनमा होमिने निष्कर्ष निकालेको हो । नेका, पर्साको पार्टी कार्यालय महावीरस्थानमा आइतवार सम्पन्न सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको छलफल तथा अन्तक्र्रियाबाट यस्तो निष्कर्ष आएको हो । कार्यक्रममा नेका पर्साका सचिव अशोक जयसवालले मधेस आन्दोलनसँग पर्सा काङ्ग्रेसको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै राजीनामा दिएरै मधेस आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । उनले शनिवार माईस्थानमा नेकाको शान्तिपूर्ण दबाब कार्यक्रम मधेसी मोर्चाका केही भिजिलान्तेहरूले बिथोल्न गरेको प्रयास निन्दनीय र दु:खद भएको बताए । त्यस किसिमको हर्कतले मधेस आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने र कसैको भलो पनि नहुने भन्दै सचिव जयसवाल
पर्सा च्याम्पियनको उपाधि राइजिङलाई
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ सात दिनदेखि सञ्चालित पर्सा च्याम्पियन क्रिकेट लिगको आज भएको फाइनल खेलमा दि राइजिङ क्लब नगवा विजयी भएको छ । टस जिती युसिसी क्लबले फिल्डिङ रोजेको थियो । दि राइजिङ क्लबले २० ओभरमा १५१ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा युसिसी क्लबले १९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १३५ रनमा सीमित भएको थियो । राइजिङ क्लबको तर्फबाट ओपनर सुजित कादमियाले ५४ रन, रिजवान अहमदले ३४, सरोज पटेलले १८ रन बनाएका थिए । जिल्ला क्रिकेट सङ्घले विजेता टिमलाई पुरस्कार वितरण गरेको राइजिङ क्लबका क्याप्टेन नाजिर शेखले जानकारी गराएका छन् ।
दिल्ली दूर कि नेशनल ट्ेरडिङ ?
शङ्करमान श्रेष्ठ सोर्‍हौं शताब्दीतिर बाबरले दिल्लीको सल्तनतमाथि आक्रमण गर्दा आफ्ना सेनालाई भन्ने गर्दथे ‘दिल्ली अभी दूर है’ । बाबरले दिल्ली फतह गर्ने बेलामा ती शब्द भन्ने गर्दथे । आज नेपालको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा ती शब्द चरितार्थ भएको प्रतीत हुन्छ । दिल्लीलाई दरियादिल भन्ने गरिन्छ । त्यहाँका मानिसका दिल ठूला, फराकिला हुन्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा ती दरियादिल कहिले ठूलो हुने गर्दछ तर कहिले खुम्चिने गर्दछ । दिल्लीको, त्यसमा पनि ‘पुरानी दिल्ली’ हैन, ‘नई दिल्ली’को ‘दिल’ जित्न सकिएन भने त्यसको प्रत्यक्ष एवं नकारात्मक असर नेपालको राजनैतिकवृत्तमा पर्ने गर्दछ । कति दिल्लीको ‘दिल’ जितेर सत्तामा आसीन भए, कति जित्न नसकेर राजनैतिक नेतृत्वबाट पन्छिए । राजनैतिक परिवर्तनको पछाडि पनि दिल्लीकै ‘दिल’ देखा पर्‍यो । विपीले दिल जित्न सकेनन् र यस बेला न प्रचण्डले, न ओलीले नै सके । पटक–पटक नाकाबन्दी दिल्लीको ‘दिल’ खुम्चिएकै परिणाम थियो । अहिले त झन् दरियादिल खुम्चिएको छ । नेपालभित्र उब्जिएको आन्तरिम समस्या पहिले सुल्झाऊ अनि दिल्लीको दिल हेर, दिल्ली टाढा छैन भनेर पटक–पटक भारतीय राजदूत रणजीत रेले भन्न
शिक्षकले सिक्ने र बुझ्ने प्रयास निरन्तर जारी राख्नुपर्छ
अनन्तकुमार लाल दास केही यस्ता शिक्षकहरू पनि हुन्छन् जो केही विद्यार्थीको प्रगति वा उन्नतिलाई सम्पूर्ण कक्षाले राम्रो गरिरहेको वा प्रगति गरिरहेको ठान्छन् । के तपाईं पनि तीमध्ये एक हुनुहुन्छ ? आजभोलि सबैभन्दा बढी सुनिने कुरा यही हो । कोही भन्छ–मेरो विषयमा चारजनाले उत्कृष्ट अड्ढ हासिल गरेका छन् भने कोही भन्छ–मेरो विषयमा पन्ध्रजनाले उत्कृष्ट अड्ढ ल्याए । चारजना भन्ने शिक्षकको कक्षामा ७० जना विद्यार्थी हुन्छ भने पन्ध्रजना भन्नेको कक्षामा १८० जना । त्यस्ता शिक्षक दुई–चारजना विद्यार्थीले राम्रो गरेकोलाई सम्पूर्ण कक्षाले नै राम्रो गरिरहेको ठान्छन् । यस्तो धारणा सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रियाको लागि खतराको सूचक हुन गएको छ तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर छैन । यस धारणा अनुरूप भएको शिक्षण सिकाइबाट केही विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर र उनीहरूद्वारा गरिने शैक्षिक क्रियाकलापको प्रदर्शन राम्रो भए तापनि बाँकी विद्यार्थीको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यस आलेखको माध्यमले छलफलमा ल्याउने जमर्को गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं दुई–तीन जना विद्यार्थीहरूमाथि मात्र ध्यान दिएपछि हुने खतरा सम्बन्धमा । यदि दुई–त
सोच्न कर लाग्दैन ?
देश अहिले जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको भेउ पाउन गार्‍हो हुँदै गएको छ । मधेसमा जारी आन्दोलनले धैर्यको नेटो काट्न थाल्यो । दु:खको सामना मानिसले कि स्पष्ट उद्देश्यका लागि गर्दछ कि आफ्नो स्वाभिमान रक्षाका लागि । मधेस केन्द्रित आन्दोलन उद्देश्य पूर्तिका लागि हो भन्ने सोचले मधेसमा बस्ने सबैले आन्दोलनको समर्थन गरे, ऐक्यबद्धता पनि जनाए । आन्दोलनको स्वरूपलाई शान्तिपूर्ण बनाएको एकोहोरो रटाइ चलिरहँदा अशान्तिपूर्ण कार्य–व्यवहारले मधेस आन्दोलनको उद्देश्य भट्किने आशड्ढा बढ्न थालेको छ । अहिले लामो आन्दोलन चल्दा र यसलाई थान्को लगाउने प्रभावकारी प्रयासप्रति ध्यान नदिंदा जमेको पानीको अवगुण यसमा पलाउन थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । बेला–बेला आन्दोलन अहिंसक भइदिंदा भौगोलिक र जातीय विभेद चर्कने आशड्ढा पनि देखिन थालेको छ । किनकि पानी जतिसुकै गुणकारी भए पनि त्यो जमिरहयो भने त्यसमा विभिन्न वित्पात उत्पन्न हुन थाल्छ । विभिन्न सङ्क्रमणकारी तत्त्वहरूको उब्जनी हुन जान्छ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि भनिएको मधेस आन्दोलन यसरी विस्तार भइरहेको छ भने स्वाभिमानको अडान लिएको सरकारको मति पनि निराशलाग्दो देख
२०७२ मङ्सिर १३ गते रविवार
मधेसी गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसको कोणसभा बिथोलेर झन्डा जलायो
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ नेपाली काङ्ग्रेस वीरगंज नगर कार्यसमितिले मधेस आन्दोलनको समर्थनमा र्‍यालीपछि आयोजना गरेको कोणसभालाई सङ्घीय समावेशी मधेसी गठबन्धनले बिथोलेर नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा जलाएको छ । काङ्ग्रेस नगर कार्यसमितिले शनिवार निकालेको समर्थन र्‍याली नगरपरिक्रमापछि माईस्थानमा कोणसभाको लागि एकीकृत भएको बेला गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ताहरूले हस्तक्षेप गरी काङ्ग्रेसको झन्डा जलाएको हो । जारी मधेस आन्दोलनमा सहभागी मधेसवादी दलहरूले पार्टीको झन्डा त्यागेर विरोधको कालो झन्डा बोकेका तर नेका वीरगंज नगर कार्यसमितिले पार्टीको झन्डा प्रयोग गरेर आन्दोलनमा घूसपैठ गर्न खोजेको भन्दै गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ताहरूले र्‍यालीमा हस्तक्षेप गरी काङ्ग्रेसको झन्डा जलाएका थिए । गठबन्धनका नेता राजेशमान सिंहले झन्डासहित र्‍याली निकालेर काङ्ग्रेसले आन्दोलन भाँड्न खोजेको बताए । उनले मधेसविरोधी संविधान जारी गर्ने कार्यमा संलग्न नेकाले जारी मधेस आन्दोलन तुहाउन घूसपैठको रूपमा पार्टीको झन्डासहित र्‍याली निकालेको आरोप लगाए । उनले मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुने हो भने नेकाबाट राजीनामा दिएर कालो झन्डा समाउन आ
ग्यास तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ
राजेश केशरीवाल, रक्सौल, १२ मङ्सिर/ खाना पकाउने ग्यासको तस्करी तथा कालोबजारी गर्ने समूहलाई शनिवार रक्सौल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रक्सौलको सोना टाकिज हलनजिकबाट भारतीय ग्यास कालोबजारी गरेको अभियोगमा एकजनालाई र·ेहात पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा नहर रोडस्थित वीरबहादुर साहको घरमा डेरा लिई बस्दै आएका राहुल कुमार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न उद्योगको भारतीय ग्यासलाई एक सिलिन्डरबाट अर्को सिलिन्डरमा खन्याएर कालोबजारी गरेकोले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको दाबी छ । रक्सौलमा विगत २ महिनायता ग्यासको कालोबाजारी बढेको उपभोक्ताले गुनासो गरेपछि प्रहरीले छापामारी गरेको हो । घटनास्थलबाट ५४ वटा विभिन्न भारतीय ग्यासको सिलिन्डर र ७ वटा खाली सिलिन्डर एवं ग्यास भर्ने उपकरणसमेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल जारी मधेस आन्दोलनको कारण नेपालतर्फ ग्यासको तस्करी बढेको र रक्सौलका उपभोक्ताहरू ग्यास अभावको मारमा परेका रक्सौलका बासिन्दाहरूको गुनासो छ । उपभोक्ताहरूले रक्सौल अनुमण्डल पदाधिकारी समक्ष गुनासो गरे लगत्तै प्रहरीसहितको कालोबजारी नियन्त्रण टोलीले शड्ढास्पदस्थलहरूमा
चुरेभावर सरकारद्वारा परिचालित, सीकेका विचारले आन्दोलन कमजोर हुने टिप्पणी
गठबन्धनद्वारा नौ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ सङ्घीय समावेशी मधेसी गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव र तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले शनिवार वीरगंजमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकार समक्ष नौ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव जारी गरेको जानकारी गराएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनका नेताहरूले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नौ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए । उनीहरूले यथाशीघ्र समस्या समाधानमा अहिले सरकारको उदासीनता घातक भएको जनाउँदै गठबन्धनले संविधानमा आधारभूतरूपमा संशोधनका लागि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत माओवादीबीच सहमति आवश्यक भएको पनि बताए । गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको नौ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा नारायणी नदीदेखि पूर्व झापासम्म मधेस प्रदेश र नारायणी नदीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म थरुहट मधेस प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने, विगतका मधेस आन्दोलनको क्
पर्सा/बारामा प्रहरीले सतर्कता बढायो
प्रस, परवानीपुर, १२ मङ्सिर/ विगत एक सातादेखि बारा र पर्सामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र बाराले जनाएका छन् । पर्साको वीरगंज बजार आसपास र राजमार्गमा प्रहरी चेकजाँच बढाइएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी गराए । पछिल्लो अवस्था हेरेर वीरगंजमा आपराधिक समूह सक्रिय भई आपराधिक घटना घटाउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै वीरगंजको शड्ढराचार्य गेट, ड्राइपोर्ट, गण्डक, परवानीपुर, लक्ष्मनवा, बसपार्क क्षेत्रमा जनपद र सशस्त्र प्रहरीले बिहान र बेलुकाको समयमा सावरीसाधन र यात्रुहरूलाई चेकजाँच गरिरहेका उनले बताए । यसैक्रममा केही दिनअघि बोर्डर आउट पोस्ट अलौंले ५० किलो विस्फोटक पदार्थ सोडियम सल्फाइड फेला पारिसकेकोले अझ सुरक्षा चुस्तता बढाइएको सीमा सुरक्षा कार्यालय पर्सा चिनीमिलका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर थापाले जनाएका छन् । यसैबीच, बाराको राजमार्ग र सीमामा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले बताएको छ । वीरगंज–पथलैया सडकखण्डको जीतपुरस्थित लालका पुलमा पनि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले चेकजाँचलाई न
उवासङ्घ सिमरा शाखाको साधारणसभा,.अर्थतन्त्र पाँच वर्ष पछाडि धकेलियो –पूर्वअध्यक्ष ढकाल
प्रस, पथलैया, १२ मङ्सिर/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले तीन महिनादेखि जारी मधेस बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिमरा शाखाको चौधौं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौं अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताए । अब मधेसमा जारी बन्द र भारतको नाकाबन्दी खुले पनि नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेको स्थितिमा आउन धेरै वर्ष लाग्ने उनको भनाइ थियो । बन्दले निजी क्षेत्रको अवस्था निकै धराशयी भएको भन्दै ढकालले बन्दकर्ता र सरकार जिम्मेवार भएर वर्तमान समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र खड्काले पनि बन्दका कारण निजी क्षेत्रको अवस्था निकै दयनीय हुन पुगेको बताए । उनले बन्दलाई तत्काल टुङ्ग्याएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै बन्दकर्ताको मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद साहले तीन महिनादेखिको बन्द अझै केही दिन जा
मानव अधिकार र राज्यको दायित्व
अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई सय दिन पार भएको आन्दोलनको राप र तापले जलिरहेको र गलिरहेको यो समयमा मानव अधिकार के हो के होइन भनेर यसका सैद्धान्तिक पक्षमा लेख्नु र बोल्नु अघि धेरैपटक घोत्लिएर सोच्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्थाका माझ समाज गुज्रिरहेको छ । हिंसा र प्रतिहिंसाका दुष्चक्रले समाज ग्रस्त हुँदै जादा अरूका तर्क सुन्ने, पढ्ने र गहिरोसँग चिन्तनमनन गर्ने धैर्यसमेत गुम्दै गएको छ । कसले के भन्यो वा लेख्यो भन्ने भन्दा पनि कुन समुदाय, क्षेत्र वा वर्णको मानिसले लेखे बोलेको हो भन्ने चश्माले हेर्ने, बुझ्ने र धारणा बनाउने लहर बढी चलिरहेको मौसममा यो लेख कहाँनिर उभिन्छ यसै भन्न कठिन छ । मानव अधिकारलाई सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार मानिएको छ । मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकारहरू हुन् र तिनलाई राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितिमा हरण गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ । मानव अधिकार व्यक्ति र राज्यबीच अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । मानव अधिकार उपभोग गर्ने कोणबाट हेर्दा नागरिक दाबीकर्ता हो भने राज्यले चाहिँ कर्तव्य निर्वाहक भएर मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको विशेषता भन
थोत्रा अनुहारमा नयाँ शक्तिको लेप
ओमप्रकाश खनाल भारतको नयाँ दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालको उदयसँगै नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको चर्चा चुलिएको धेरैको स्मरणमा अहिले पनि ताजै हुनुपर्दछ । त्यसताका दिल्लीको सत्तामा केजरीवालको आम आदमी पार्टीले जमाएको अकल्पनीय पकडबाट प्रभावित भएरै डा. बाबुराम भट्टराईको मनमा नयाँ शक्तिको लहड जागेको बुझ्न कठिन थिएन । एकाघरका कमान्डर प्रचण्डसँगको मतान्तरले नयाँ शक्तिको जग बसाल्यो । दिल्लीको रापतापबाट अति प्रभावित नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेता भट्टराईले शुरू गरेको नयाँ शक्ति गठनको गति प्रकारान्तरले यति बेला तात्तिएको भान हुन थालेको छ । भट्टराईको अगुवाइमा केही पुरानै सीपविहीन पात्रहरूको अनुहारमा नयाँ शक्तिको लेप लिपपोतको दृश्यावली प्रकट भइराखेको छ । समाचार र सामाजिक सञ्जालमा रङ्गिएका नयाँ शक्तिका नवअनुयायीहरूको आलाप सुन्दा जोकोहीलाई लाग्न सक्छ– शोषित, पीडित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक सबैका दु:ख दूर गर्ने जादु यिनीहरूसितै छ । यिनीहरू नै सबैका पीडा र दु:ख हरणकर्ता र मुक्तिदाता हुन् । स्मरणीय संयोग कस्तो भने यो समयान्तरमा दिल्लीमा केजरीवालको राजनीतिक यात्रा उत्कर्षोन्मुख भइ
मनोबलको शक्ति: एक दैवी अनुभूति
साधनाको आधारमा सफलताहरू पाइन्छन् । साधनहरूलाई नै बल भनिन्छ । प्रत्यक्ष बलमा धनबल, बाहुबल, शस्त्रबल, बुद्धिबल आदि प्रमुख हुन्, तर सबैभन्दा ठूलो हो– मनोबल । मनोबलको तात्पर्य शिक्षाको कल्पना, बहुज्ञता, अनुभवशीलताले होइन कि दृढ निश्चयले हुन्छ । यसलाई यदि आदर्शको निमित्त प्रयोग गरिन्छ भने त्यसैलाई सड्ढल्पबल पनि भनिन्छ । जसको सड्ढल्पशक्ति जति बलवान् छ, त्यसलाई त्यति नै स्तरको बलवान् मान्नुपर्छ । कसै–कसैमा यो शक्ति जन्मजात पनि हुन्छ, तर यो आवश्यक छैन । यसलाई अभ्यासबाट बढाउन सकिन्छ । सानो काममा हात हाल्नु र त्यसलाई पूरा गरेर मात्रै चैन लिनु, यो मनोबल बढाउने राम्रो तरिका हो । एकपछि अर्को काम हातमा लिनु र त्यसका कठिनाइसँग जुझ्नु नै त्यो मार्ग हो, जहाँ हिंड्दा मनोबल आर्जित गर्न सकिन्छ । यो विभूति जसको हातमा पर्‍यो बुझ्नुपर्छ कि महामानव बन्ने सूत्र त्यसको हात लागेको छ । प्राय: हेरिन्छ कि धेरै साधन भएर पनि मान्छे साधारण काम पनि गर्न सक्दैन । यिनीहरूको विचार डगमगाउँछ । जुन काम हातमा लिइएको छ, त्यो उचित छ कि छैन, आफूसँग हुन सक्छ कि सक्दैन, यस्ता विकल्पहरू मनमा उठिरहन्छन् । काँचो मन एउटा क
२०७२ मङ्सिर १२ गते शनिवार
मनोज ग्यासद्वारा तीन हजार ग्यास सिलिन्डर वितरण, प्रहरी र प्रशासनबाट हस्तक्षेप भएको गुनासो
प्रस, परवानीपुर, ११ मङ्सिर/ वीरगंजमा मनोज ग्यास उद्योगले शुक्रवार दोस्रोपटक उपभोक्तालाई ग्यास वितरण गरेको छ । वीरगंज–१५ स्थित नेशनल ट्ेरडिङबाट करिब २,९७० वटा ग्यास सिलिन्डर वितरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । ग्यास पाउने हल्लाले बितेको सोमवार रातिदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्तामध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतले ग्यास पाएनन् । करिब ४ हजार ५ सयजना उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर लाइनमा थिए । ग्यास वितरण शुक्रवार बिहान ७ देखि साँझ ६ बजेसम्म भएको थियो । वीरगंजमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता मनोज ग्यासकै रहेकाले दिनभरि ग्यास वितरण गरिए तापनि लाइनमा बसेका धेरैजना उपभोक्ताले ग्यास नपाएर रित्तो हात फर्कनुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए । मनोज ग्यासको सिलिन्डर नगर क्षेत्रमा मात्रै ३८ हजारभन्दा बढी रहेको सो उद्योगले जनाएको छ । वीरगंज–५ बिर्ताका जयदीप सर्राफका अनुसार मनोज ग्यास वितरणमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मनोमानी तथा उदासीनताको कारण उपभोक्ताले कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । त्यस्तै, नेशनल ट्रेडिङको कम्पाउन्डभित्र ड्यूटीमा खटेक
आन्दोलनबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम
प्रस, रौतहट, ११ मङ्सिर/ ‘जारी मधेस आन्दोलन र आजको सन्दर्भ’ विषयमा शुक्रवार गौरमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय समावेशी मधेसी गठबन्धन जिल्ला कार्यसमिति रौतहटले गौर नगरपालिकाको सभाकक्षमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा एवं युवा विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो । मधेस आन्दोलनको १०५ औं दिनसम्म आइपुग्दा आन्दोलनप्रति नकारात्मक र सकारात्मक पक्षको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गठबन्धनले जनाएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्न गाउँगाउँमा समिति गठन गरेर तस्करको पहिचान गर्न सुझाव दिएका थिए । नागरिक समाजका अगुवा ग·ाधर वर्माले तस्करको फोटोसहित फेसबूकमा राख्नसमेत आग्रह गरे । उनले अब निर्णनायक आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा गठबन्धनका युवा नेता ललित मल्लिकले आएका सुझावहरूलाई कार्यावन्यन गर्न तत्पर रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । सो अवसरमा युवा नेता राजीवकुमार सिंह, वकिल सुरेश तिवारी, नन्दकिशोर साह, शम्भु गिरीलगायत
भारतबाट कृषकलाई डिजल ल्याउन दिने फोरमको निर्णय
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, ११ मङ्सिर/ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल बाराले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कृषकहरूलाई सीमावर्ती नाकाबाट डिजल बल्याउन दिने निर्णय गरेको छ । हाल मधेसमा धान कटनी र दवनी गर्ने बेला भएकोले सोलाई मध्यनजर गर्दै कृषकहरूलाई बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म डिजल ल्याउन छुट दिने निर्णय गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सीके राउतका कार्यकर्तामाथि हातहतियार मुद्दा
प्रस, परवानीपुर, ११ मङ्सिर/ स्वतन्त्र मधेस महागठबन्धनमा आबद्ध चारजनामाथि प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाएको छ । बाराको बरियापुरबाट मङ्सिर ८ गते पक्राउ परेका चारजना कार्यकर्ताहरूमाथि प्रहरीले बिहीवार हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता गरिएकाहरूमा महागढीमाई नपा–१ बस्ने राजाबाबू साह, वडा नं. ५ का विनोद साह, टेढाकट्टी बस्ने बृजेश सिंह र नरही गाविस–७ निवासी सद्दाम हुसैन रहेका छन् । उनीहरूलाई बरियापुरस्थित गढीमाई धर्मशालामा गोप्य बैठक गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले झूटो मुद्दामा फसाउन खोजेको उनीहरूका परिवारजनले आरोप लगाएका छन् । बृजेश सिंहका भाइ दिपेश सिंहका अनुसार पक्राउ गर्ने बेलामा प्रहरीले कुनै किसिमका हातहतियार फेला पारेको थिएन । यस विषयमा बाराका प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र मल्लसँग बुझ्दा उनले हातहतियारसहित गोप्य बैठक गरिरहेको अवस्थामा सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई हतियारसहित पक्राउ गरेको बताए । उनले बैठक स्थलबाट प्रहरीले केही स्थानीय नलकटुवा बन्दुकहरू फेला पारेको दाबी गरे । यसैबीच इलाका प्रहरी क
मधेस आन्दोलन, आर्थिक समस्या र श्वेतपत्र
शीतल महतो मुलुकको आर्थिक अवस्था चित्रण गर्दै सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले म·लवार “देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा”सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरेको छ । सि·ो मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला आएको सरकारको श्वेतपत्रले आम नागरिकले तत्काल पाउन सक्ने ठोस राहतका कार्यक्रम र अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको जटिलताहरूलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसलाई सशक्तरूपमा समेट्न सकेन । यो केवल कर्मकाण्डको रूपमा ल्याएको दस्तावेज मात्रै बनेको छ । किनभने सरकारले जारी गर्ने श्वेतपत्र सरकारको नीतिपत्र पनि हो । “श्वेत” को अर्थ सेतो कागजमा लेखिने काला अक्षरहरूको सँगालो मात्र होइन, राज्यले जारी गर्ने श्वेतपत्र खास विषयमा एउटा निश्चित कालखण्डमा उत्पन्न भएको समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गरी खास ढ·ले त्यसलाई समाधान गर्न सार्वजनिक गरिने प्रभावकारी र विश्वासयोग्य प्रतिवेदन भनेर मानिन्छ । खास विषयमा सम्बोधन गर्न जारी गरिने श्वेतपत्रमा उल्लिखित प्रस्तावपछि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध कानुनको आधार पनि बन्ने गर्छ । विश्वको अनुभवलाई हेर्ने हो भन्ने विशेषगरी संसद् नचलेक
‘छेउ न टुप्पो, कुराको मात्र झुप्पो’ जस्तै छ सरकारी वार्ता
वैद्यनाथ ठाकुर यति बेला तीन करोड नेपाली सड्ढटपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । चुलो बाल्ने कुनै साधन छैन । अस्पतालमा ओखतीको अभाव भइसक्यो । तराईमा भएको आन्दोलनले एक सय सात दिन पूरा गरिसकेको छ । नाकाबन्दीले गर्दा सरकारको कानमा बतास लाग्ला कि भनेको पनि झन्डै ६७ दिन हुँदैछ तर पनि निकम्मा तथा उत्तरदायित्वविहीन सरकार कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त भएर सुतेको छ । रावणको भाइ कुम्भकर्णलाई निद्राबाट उठाउन खसी र पाडाहरू दिने गरिन्थ्यो तर यो सरकारले झन्डै ५० जना मधेसीपुत्रको रगत खाइसकेर पनि अझै ब्यूँझेको छैन । देश दिन प्रतिदिन भयावहतिर उन्मुख हुँदैछ । सरकारमा रहेका नेताहरूको बोली सुन्दा समस्याको समाधानभन्दा पनि झन् आगोमा घ्यू थपिरहेका छन् । रक्षामन्त्री भीम रावल सेना परिचालनको कुरा एकातिर गर्दैछन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओली पहाडबाट मधेस कुनै हालतमा नछुट्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सामान्य ज्ञान भएको व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरो हो पहाड, हिमाल र मधेस प्रकृतिले नै छुट्याइदिएको छ । यसलाई कुनै पनि शासकले जोड्न सक्दैन । जारी गरिएको संविधानमा सात प्रदेशमध्ये दुई नम्बर प्रदेशमा आठवटा जिल्ला रा
मोर्चाले पुनर्विचार गरोस्
आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको मोर्चाले विद्यालय पोशाक निषेध गरेको कुराको चौतर्फीरूपमा गुनासाहरू आइरहेका छन् । आन्दोलनमा समाहित जनसमुदायको बीचमा पनि केही असन्तोष देखियो । विद्यालय खुल्नुअगावै पोशाक निषेध गरिएको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत् मोर्चाले सार्वजनिक गरेको थियो । तर पनि केही स्थानहरूमा सो सर्त उल्लङ्घल गर्ने प्रयासहरू भए । बारा जिल्लाको केही विद्यालयका अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पोशाक लगाएर विद्यालय पठाए । मोर्चाले कडा आपत्ति जनाएपछि मात्रै बालबालिकाले विद्यालय पोशाक लगाउन छाडे । मधेसका बालबालिका विद्यालयमा छन् भने अभिभावक आन्दोलनमा छन् । यो अवस्थामा मोर्चाले विद्यालयसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिंदा आन्दोलनका सहभागी अभिभावकहरूको मनोभावना तथा आशयलाई समेत बुझेर निर्णय गर्नु अति उत्तम ठहर्छ । माविस्तरका विद्यार्थीहरू शारीरिकरूपमा ठूलो भइसकेका हुन्छन् । झडप नै परेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरूलाई आन्दोलनकारी भन्ठान्लान् भने आन्दोलनकारीले प्रहरीको मान्छे ठान्न सक्छन् । यो अवस्थामा बालबालिका असुरक्षित हुनेछन् । हुनत पोशाकमा भएका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा सहभाग
२०७२ मङ्सिर ११ गते शुक्रवार
पर्सा र रौतहटबाट सीके राउत समर्थकहरू पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १० मङ्सिर/ सीके राउत पक्षधरहरूले बिहीवार माईस्थानमा गर्न लागेको सभालाई प्रहरीले बिथोलेका छन् । कार्यकर्ताहरूले तुल ब्यानर झुन्ड्याइ माईस्थान मन्दिरअगाडि भाषण गर्ने बेलामा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बारा, पर्साका इन्चार्ज राजेश साह रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सीके राउत पक्षधरले एक वर्ष पहिले काठमाडौंबाट सीके राउतलाई पक्राउ गरेको दिन पारी आज माईस्थानको प्रा·णमा आमसभा गर्न लाग्दा प्रहरीले बिथोलेको हो । प्रहरीले साहलाई पक्राउ गर्नुका साथै तुल ब्यानर पनि सँगै लगेको थियो । प्रस, रौतहट/ मधेस देशको माग गर्दै आज सीके राउतका कार्यकर्ताहरूले जुलुस प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले २५ जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा रौतहट जिल्ला गाविस लौकाहाका ५२ वर्षीय परिषद् संयोजक महम्मद हुसैन, जिल्ला संयोजक गाविस हजमिनियाका अशोक सिंह, गाविस पचरूखीका वीरेन्द्रकुमार साह, गाविस ग·ापिपराका २६ वर्षीय अशोककुमार साह, राजपुर–९ का ४० वर्षीय नेमालाल यादव, पिपरा रजवाडाका सरोज साह, मोतीपुर नरकटियाका केदार गिरी, झुन्खुन्वाका रमेश तिव